Reality Test2: ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’मा कसरी हुँदै छ लुट ? - Ratopati
ठगी प्रकरण २ : नेपाल मेडिकल कलेजको यो हदसम्मको बदमासी
सरकारको आमा सुरक्षा कार्यक्रममा निजी अस्पतालले कसरी लुट मच्चाइरहेका छन्, त्यसको एउटा उदाहरण सिनामंगलस्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटलले गरेको एउटा नमुना हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ ।
नेपाल मेडिकल कलेजको यो हदसम्मको बदमासी
अत्तरखेल जोरपाटीमा रहेको नेपाल मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटलले पनि सरकारसँग सम्झौता गरेर आमा सुरक्षा कार्यक्रम लिएको छ । तर, यस अस्पतालको बदमासीको हद त केएमसीको भन्दा माथि छ ।
२०७३ वैशाख ११ गते सुत्केरी हुनाका लागि अस्पतालमा भर्ना भएकी सिन्धुपाल्चोककी अञ्जना भण्डारीले यस अस्पतालमा १६ हजारभन्दा बढी रकम बुझाएकी छन् । सुरुदेखि नै नियमित रूपमा जचाउनसमेत यसै अस्पतालमा आएकी अञ्जनाले सुत्केरी भएर घर जाँदासम्म औषधिलगायतका शीर्षकमा करिब १६ हजार रुपैयाँ बुझाइन् ।
आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि यस अस्पतालले पनि सुत्केरी वा सुत्केरीका आफन्तसँग थप पैसा लिन पाउँदैन किनकि अस्पतालले नेपाल सरकारबाटै वार्षिक करोडौँ रकम यही शीर्षकमा बुझेको हुन्छ । तर, हेर्नुहोस् अस्पतालले अञ्जनासँग भर्ना भएपछि पनि पैसा लिएका केही उदाहरण ।
यस अस्पतालका विभिन्न स्थानमा ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’बारे पोस्टर त टाँसिएको छ र निःशुल्क पनि भनिएको छ । तर, निःशुल्क भने पनि सेवा भने निःशुल्क छैन ।
भर्ना भएदेखि डिस्चार्ज नभएसम्म आमालाई लाग्ने सम्पूर्ण औषधि र सेवा निःशुल्क दिनुपर्छ । अञ्जनाको अपरेसन भएको करिब महिना दिनपछि हामी अञ्जनाको घर खोज्दै माकलबारी पुग्यौँ । घरमा अञ्जनाकी आमा पनि भेटिइन् । जब हामीले आमा सुरक्षा कार्यक्रम र अस्पतालमा भएको खर्चबारे सोध्यौँ, उनले अचम्म मानिन् । अस्पतालमा निःशुल्क प्रसूति सेवा थियो र त्यसका लागि सरकारले पैसा दिएको छ भन्ने आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको उनले बताइन् ।
जोरपाटीको यो अस्पतालले त यतिसम्म गरेको रहेछ कि बिरामीलाई अपरेसन चार्ज भनेर सात हजार पनि लिएको रहेछ । तर, बिरामी डिस्चार्ज हुने समयमा उक्त बिल मागेर अस्पताल प्रशासन आफैंले राखी पठाइएको रहेछ । सुत्केरी अञ्जना भण्डारीका भाइले भने ‘पहिले पैसा लिएर बिल दिएका थिए । डिस्चार्ज हुने बेलामा सबै बिल ल्याउन भने । पहिले त्यो बिल फेला परेन । तर, त्यो बिल नभई डिस्चार्ज गर्न मिल्दैन भने । पछि खोजेर त्यो बिल ल्याएर दियौँ । तर, त्यो सात हजारको बिलचाहिँ यहीँ राख्ने हो भनेर उनीहरूले नै राखे अनि मात्रै डिस्चार्ज गरे ।’
यस अस्पतालले पनि बिरामीको अकुपेन्सी बढोस् भनेर यो सेवा लिएको बताएको छ । ‘सामान्य सुत्केरी हुँदा यो रकमले धाने पनि अपरेसन गर्नुपर्दा यो रकमले धान्दैन । त्यसैले कतिपय औषधि बिरामीलाई पनि किन्न लगाइएको होला । तर पनि अधिकांश औषधि भने निःशुल्क नै दिने गरेका छौँ,’ अस्पतालका निर्देशक डा. राजकिशोर श्रेष्ठले भने । ‘मेडिकल कलेज भएकाले प्राक्टिकलका लागि बिरामी हुने भएकाले यस्तो सेवा लिएका हौँ,’ श्रेष्ठले भने ।
जब हामीले अस्पतालका निर्देशक श्रेष्ठसँग ‘किन राज्य र सुत्केरी दुवैबाट दोहोरो रकम असुल गरेको भनेर सोध्यौँ । उनी अकमकिए । तर, अस्पतालको नीति बिरामीसँग पनि पैसा लिने र राज्यसँग पनि अनुदान लिने नभएको भन्दै आफूहरूले उक्त विषयमा छानबिन गर्ने बताए । तर समाचार बाहिर नल्याउन उनले आग्रह गर्दै कहिलेकाहीँ गल्ती हुने बताए ।
यसरी यस अस्पतालले पनि आमा सुरक्षा कार्यक्रम लिएर निःशुल्क प्रसूति सेवा दिने भने पनि सुत्केरी र सरकार दुवैलाई ठगी गरिरहेको छ । यस अस्पतालले त अपरेसनको समेत शुल्क लिएर डिस्चार्ज हुने बेलामा बिल जफत गर्नु अत्यन्तै लज्जास्पद विषय हो ।
‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’का नाममा कुन अस्पतालले कति पैसा लगे
सरकारको आमा सुरक्षा कार्यक्रममा काठमाडौँबाट सबैभन्दा बढी पैसा लैजाने अस्पताल काठमाडौँ मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटल सिनामंगल हो । यो अस्पतालले आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा एक करोड नौ लाख ५९ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ । यस अस्पतालले आव ०७२÷७३ मा एक हजार एक सय ३८ सामान्य, ५७ जटिल र नौ सय ५४ वटा अपरेसन गरी सुत्केरी गराएको थियो । जसमध्ये सामान्यबाट एक हजार पाँच सय, जटिल बाट तीन हजार र अपरेसनबाट सात हजारका दरले उसले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँबाट करोडभन्दा बढी रकम लिएको हो ।
यस आर्थिक वर्षका फागुन मसान्तसम्ममा पनि उसले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँबाट ८० लाख ४० हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ । यस आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा यो अस्पतालले एक हजार पाँच सय ८८ जनाको सुत्केरी गराई यो रकम बुझिसकेको हो ।
त्यसैगरी, काठमाडौँमा दोस्रो नम्बरमा रहेको नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटीले पनि आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँबाट ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’को नाममा एक करोड दुई लाख ६१ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ । आव ०७१/७२ मा कुल दुई हजार ६ सय ४१ जनाको सुत्केरी गराएको यस स्वास्थ्य संस्थाले पाँच सय ७८ जनाको अपरेसन गरेको थियो ।
यस आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने यो अस्पतालले ६७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ लिइसकेको छ । फागुन मसान्तसमममा यस अस्पतालले एक हजार सात सय ६६ जनाको सुत्केरी गराएको तथ्यांक छ ।
यीबाहेक काठमाडौँमा आमा सुरक्षा कार्यक्रमको सेवा लिएका शंकरापुर अस्पताल जोरपाटी, कीर्तिपुर अस्पताल आदिले पनि सेवाग्राहीसँगसमेत पैसा असुल गर्ने गरेका छन् । कतिपय अस्पतालले त आमा सुरक्षा कार्यक्रमको जानकारी सुत्केरी वा तिनका आफन्तलाई दिँदै दिँदैनन् र अस्पतालले डिस्काउँट दिएको भनेर झुट बोलिरहेका हुन्छन् ।
यसरी आमा सुरक्षा कार्यक्रमका नाममा काठमाडौँबाट मात्रै वार्षिक साढे दुई करोड रुपैयाँ निजी अस्पतालको खातामा जान्छ । तर, निजी अस्पतालले भने राज्य र सुत्केरी दुवैसँग पैसा असुल गरिरहेका छन् । गतिलो अनुगमन हुन नसक्दा निजी अस्पतालले ठगिरहेका छन्, अनि सुत्केरीहरू ठगिँदै छन् ।
हुन्छ त कारबाही ?
निजी होस् या सरकारी अस्पताल, आमा सुरक्षा कार्यक्रमको सम्झौता गरिसकेपछि ती अस्पतालले सुत्केरी वा तिनका आफन्तसँग थप रकम लिन नपाइने बताउन्छन् स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ । तर पनि निजी अस्पतालले कि त सुत्केरी वा तिनका आफन्तलाई आमा सुरक्षा कार्यक्रमबारे जानकारी नै दिँदैनन्, या त जानकारी भएपनि थप शुल्क असुल गरिरहेका हुन्छन् । तर राज्य र बिरामी दुवैसँग दोहोरो रकम लिन नपाइने र यदि त्यस्तो गरेको भेटिएमा कडा कारबाही हुने बताउँछन् प्रवक्ता श्रेष्ठ । ‘हामीलाई प्रमाण दिनुहोस्, हामी त्यस्ता अस्पताललाई हदैसम्मको कारबाही गर्छौं ।’